Uhlalutyo lweParrot Mambo, idrone encinci yokujonga | Iindaba zeGajethi
Xa uthenga i-drone ngaphandle kokuchitha imali eninzi, ii-mini drones ziye zaba yinto eqhelekileyo. Iidrones ezinokusebenza gwenxa kunye namava wenqwelomoya angathandekiyo ahlala ekhathaza amaphepha okuthengisa kwi-Intanethi kwaye ucinga ukuba awungekhe ufumane into efanelekileyo kolu luhlu, kodwa uParrot wayefuna ukutshintsha izinto kunye noMambo drone wakhe.
IParrot Mambo ligama lale mini yedrone ineempawu ezizodwa Ukuba siyayithelekisa needrones ezifanayo, nangona ngokucacileyo iyakwenza oko ngexabiso eliphezulu kunaleli elisahleli kuluhlu umntu afuna nje ukonwaba aya kukulungela ukuhlawula. Sihlalutya enye yeedrones ezincinci kwimarike.
Ngobungakanani be-18 × 18 kunye ne-63 yeegram kuphela zobunzima, yidrone efanelekileyo yokusetyenziswa kwangaphakathi. Ukungabikho kolawulo olukude (kuthengiswa njengokukhetha) kuthetha ukuba izixhobo zethu eziphathwayo, zombini ii-smartphones kunye neetafile, kufuneka zisetyenziselwe ukusebenza. Enkosi ngeFreeflight Mini app, ehambelana nezixhobo iOS y Android kwaye simahla. Unxibelelwano lweBluetooth 4.0 yinto evumela uqhagamshelo kwii-smartphones zethu kwaye inoluhlu olukufikelela kwiimitha ezingama-20.
Ibhetri ihlala malunga nemizuzu eli-9 ukuba asizisebenzisi izixhobo ezenza le nto ibe yinto ekhethekileyo: i-cannon yeplastiki ye-pellet kunye ne-tweezers ezibekwe ngaphezulu kwaye ezenza ukuba ibe yinto yokudlala efanelekileyo yabancinci (kwaye ayincinci kangako) indlu. Kwisiqingatha seyure siya kuyitshaja kwakhona ibhetri, engalunganga kodwa ukufumana ibhetri eyongezelelweyo kuya kuba yinto ebaluleke kakhulu ukonwabela le mini drone. Ikhamera ye-0,3 Mpx kunye ne-sensors zazo zonke iintlobo (i-accelerometer, i-gyroscope, i-barometer, i-inertial sensor kunye ne-baroscopic) zigqiba iinkcukacha.
Le Parrot Mambo yeyona drone efanelekileyo kwabo batsha kweli hlabathi, enyanisweni indlela elula ngayo yenza ukuba kungacetyiswa nakubani na okhangela into ebhekele phaya. Ukufika kunye nokususa kunokwenzeka ekuchukumiseni iqhosha kwiscreen, kwaye ukusukela oko inolawulo lokuphakama oluzenzekelayo kunye nozinzo olunomnqweno ngamanqanaba aphezulu aphezuluKuya kufuneka ukhathazeke ngokuhamba nayo ngaphandle kokungqubana nemiqobo. Elinye icala elisezantsi kukuba kukho ukulibaziseka phakathi kwemiyalelo yakho kunye nempendulo yedrone engonwabisiyo ekuqaleni kodwa oya uyiqhela kungekudala kwaye ufunde ukubuyekeza. Njengoko besitsho ngeqhina lolawulo (ngokuzithandela) oku kuyasonjululwa kwaye ukuphathwa kuchaneke ngakumbi.
Le mini yedrone inokuba nethuba lokususa esandleni sakho ngokuyivula inyuse kwaye ukuba uyathanda iipirouettes ungazenza ngokucinezela iqhosha kwiscreen se-smartphone yakho. Izilawuli zingenziwa ngokobunzima obukhuluUnokonyusa isantya sentshukumo kwabo bafuna ubunzima ngakumbi, kodwa uhlala ukhumbula ukuba ayisiyiyo idrone yabasebenzisi abaphambili, kude nayo. Ewe kunjalo, ukuphatha ngaphandle kuyinkimbinkimbi kancinci nje ukuba kukho umoya, ukuphulukana nolozinzo luphawu lolo.
IParrot Mambo ayisiyodwa kuphela ngenxa yokuba inetekhnoloji ethe kratya kunokuba bekulindelwe kwidrone yolu hlobo, kodwa ikwabandakanya ezinye izixhobo zentsusa: umgqomo kunye neethiza. Zimbini iithoyi ezincinci ezinamathele phezulu kwimizuzwana embalwa kwaye ezikuvumela ukonwabela into eyahlukileyo kunokubhabha nje. Ukudubula iibhola zeplastiki nge-drone kuxabiseke kakhulu kumntu oneminyaka elishumi ubudalaNokuba sele umdala, ukuzama ukukhetha into nge-tweezers phantse akunakwenzeka kodwa kumnandi nje.
Ewe ungalindelanga ukuba ngezixhobo ezibekwe kwi-drone kwaye uzisebenzise, ​​ibhetri iya kukufikelela ngaphakathi kwemizuzu eli-9, kude nayo. Ngethamsanqa, nje ukuba ibhetri iphele, ii-LED zangaphambili zedrone zibomvu kwaye zihlala zikhuselekile. Isicelo sikuvumela ukuba wazi ibhetri eseleyo ngawo onke amaxesha.
Enye into eneParrot Mambo enayo kwaye esele idityanisiwe emzimbeni wayo yikhamera. Yimbali ye-anecdotal, kuba isikhundla sayo okanye umgangatho wayo awusivumeli ukuba senze lukhulu. Uyakwazi kuphela ukuthatha imifanekiso ye-zenith kunye nomgangatho ophantsi, kuba i-0,3 Mpx yayo ayiniki kangako. Ukufumana ifoto engacacanga okanye engenangxolo kunzima, nangona kuyifezekisile. Ngaphandle koku, unokufumana izinto ezihlekisayo ngaphakathi endlwini, ngokwembono oqhele ukuzibona.
Ngokuphatha kunye nokuzinza okungaphezulu kakhulu komndilili weemodeli ezininzi kudidi lwayo, le Parrot mini drone ilungele abo bafuna ukuqala ngolu hlobo lwesixhobo okanye njengesipho. Nawuphi na umntwana omalunga neshumi leminyaka ubudala uya kuba nakho ukuyiphatha ngaphandle kwengxaki ngento encinci ayenzileyo ngaphandle kokukhathazeka ngokunyaniseka kwayo. Ngexabiso elimalunga ne- € 99 kwi Amazon Kukuthengwa okucetyiswayo kakhulu kwabo banqwenela ukuqala kweli hlabathi okanye benze isipho esihle.
Uzinzile kwaye kulula ukuphatha
Ulawulwa kwi-smartphone nakwi-tablet
Izinto ezifanelekileyo kunye noyilo
Umgqomo kunye nokubamba kokonwaba okongeziweyo
Ulawulo olunzima ngakumbi ngaphandle kunye nomoya
Ikhamera esemgangathweni esezantsi
Ukulibaziseka okuncinci kulawulo
Phantse unyanzelwe ibhetri yesibini
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Uhlalutyo lweParrot Mambo, idrone encinci ekufuneka uyiqwalasele